PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-12-06 - Isibonda siboliswa ngamaxolo aso!
Isibonda siboliswa ngamaxolo aso!
Isolezwe lesiXhosa - 2018-12-06 - IZIMVO - Ngokubhalwe nguXolani Mavela
XA bendibukele kumabonakude mhla kumiselwa iintsuku ezili16 zokulwa nokuxhatshazwa kwamalungelo amanina nabantwana, ndizive ndizibuza imibuzo eliqela.
Phakathi kwale mibuzo yile: Kungani na ukuba abantu baye besoyiswa kukuziphatha ngokufanelekileyo? Kutheni abantu besiya bekhulelwa bubulwanyana noburhalarhume? Siyintoni na isizathu sokuphela kwentlonipho nembeko kumzi wakowethu ngokubanzi?
Kwasuke kwathini ukuze kuphele ukumxabisa umntu, ukumxhasa umntu, ukumhlonipha umntu, suke kukhule ukubulalana, ukudlwengulana, ukuxhaphazana, ukumonelana, ukwenzelana amayelenqe kwanokucingelana okubi phakathi kwesizwe sakowethu?
Satshatyalaliswa yintoni isizwe sikantu esasikholose ngendili, ubuntu, ukuvuyisana, ukuphathisana, ukondlana nokuxhasana?
Thina sikhula sichazelwa ngesizwe esasibukana ngokwakhana, ukuphakanyiswa kwabo babonakala bephantsi, ukunqomelana ukuze nongenankomo asenge ade afuye, isizwe esasikhuthaza ilima umntu engajongani nomsebenzi wendlu yakhe okanye umzi wakhe yedwa.
Uphi undonakele kwisizwe sanamhlanje? Impendulo ndiyinikwe liciko ebendisidla nalo imbadu lakwaKrila, into kaHlanganise, yandinika impendulo etsolileyo isithi: “Mngwevu, amaXhosa awaphazami xa esithi akukho sibonda singaboliswa ngamaxolo aso.”
Isibonda somthi singathi sisomelele, siwuthwele ngobunono umthi nesiqu sawo, amasebe kwanamagqabi awo, suka kubole amaxolo.
Emva kokubola kwamaxolo, nesibonda siya sibola, sinkumke, kugqibele ngokuwa komthi kuphele kuthi nya. Wakuwa umthi, indalo iba lixhoba lemozulu etshintsha-tshintshayo, kutsho kuxwebe, kutshe imilambo, kumke imizi, neentaka zihleleleke ngenxa yokungabi nazindlwane.
Konke oku kwalatha intshabalalo. Masivume samkele mawethu ukuba kwintlalo kaXhosa yamandulo, izinto ezimbi ezambethe intlalo yale mihla zazingekho, kungenjalo zazinqabe oku kwezinyo lenkuku. Kumaxhego namaxhegokazi endincokole nawo ngalo mba, ebethetha ophele, abambe amazinyo, angcangcazele, suka iintloko zithokombise ngenxa yokukhathazwa kukwanda kokukrazuka kwezimilo kwintlalo yethu kule mihla siphila kuyo.
Ngenxa yokungakwazi kwethu ukuziphatha nokuqaqadeka kwethu, ubuXhosa obabukade buxabisekile kwaye buhloniphekile siyabuthuka, siyabuhlaza, sihlekisa ngabo ezizweni kwaye siyabutshabalalisa.
Ngenxa yezenzo zethu maXhosa anamhlanje, ubuXhosa obabuthwele isidima nobasekwa ngoomawokhulu siyabungcwaba, siyabubolisa ngokufanayo nesibonda esiboliswa ngamaxolo aso.
Iintsana zethu ziyila zize zakhe amaqela emigulukudu aphatha kakubi abantu zize zidale umoya wonxunguphalo kwiindawo esihlala kuzo mzi ontsundu. Mihla le siva ngeentsana zethu ezingasinanzanga kwaphela isikolo nokuthobela abazali, suka zibulalane, zidlwengulane, kusetyenziswe iziyobisi, utywala zidlale ngabo, zinyanzele nabazali ekubeni bazenzele nokungaphezu komlinganiselo abanokufikelela kuwo abo bazali, zide ziphelele entolongweni kuba kakade ubundlavini bukhokelela kwantshabalala. Isizwe sethu njengesibonda somthi, siya sibola ngenxa yeentsana zethu.
Amadoda adlwengula axhaphaze amanina, amantombazana, kude mva nje kwande nokudlwengulwa kwamakhwenkwe ngamadoda. Abantu abazikhethela ukuthandana besisini esinye baphela bengamaxhoba okudlwengulwa nokugwintwa ngamadoda anamhlanje.
Amadoda aziva amandla ngokubetha aze axhaphaze amakhosikazi, namakhosikazi avukelwa kukuxhaphaza abayeni konke kuyafana kuyimbondandimunye yesihelegu sikagilikankqo.
Umzali nokuba uzamile ukuqeqesha, inzala iyaphukaneka ikhethe ukuqaqadeka, baphele behlazeka nabo bazali besifa ziintloni, bebhuqwa ziintliziyo bade bawe kube kuphelile ngabo. Inene akukho sibonda singaboliswa ngamaxolo aso.
Kanye ngoku kuhlonitshwa iintsuku ezili16 zamalungelo amanina nabantwana, izikrelemnqa zoonatyhofithi boofunx`uthuli bezihange baphelelwe ziintloni, bathe gqolo ukuxhaphaza, ukudlwengula nokugebenga amanina nabantwana bezwe lakowethu.
Mihla le kwiindaba zikanomathotholo, umabonakude, oolindithuba nakumaphephandaba, kuvakaliswa ngokuxhatshazwa, ukudlwengulwa nokubulawa kweentombi namanina, kwanabantwana ingakumbi abo banolusu olumhlophe babizwa ngobu-Albino ngolwimi lwasemzini.
Kwakule mihla yokuhlonitshwa kwamalungelo amanina nabantwana, isizwe sothuswe kukunikwa kwezwe lethu igama elibi ezizweni.
Kule Cawa idlulileyo, umhla wesibini kule nyanga yoMnga, kumsitho wokubhiyozelwa kukabawo uMadiba kumabala ezemidlalo eRhawutini, bekugcwele kunyakazela, neendwalutho zehlabathi ziphume ngobuninzi bazo.
Umsitho uhambe kakuhle kakhulu kwaye neenjongo zawo zokunyusa imali enokuxhasa imibutho ngemibutho eyahlukeneyo ejolise kwiinkonzo zoluntu, ziye zafezekiseka. Ilishwa lelokuba kube kho amaxolo ahlaze ase afanisa izwe lethu njengelibole lulwaphulomthetho nobundlavini.
Emva kwalo mnyhadala ubusele uliphakamisele emanqwanqweni ilizwe loMzantsi Afrika, babe liqela abantu abaphangiweyo bahluthelwa nezinto zabo.
Isidima ebesele sisizuze ngokusingatha umsitho okwinqanaba lehlabathi, siphucwe bobo bundlobongela benziwe zezo ndlavini zabaxhaphazi abangoonqalintloko.
Masiphakameni simanyaneni mawethu, ubundlavini obufuna ukuhlaza ilizwe lethu, sibulwe kusiphuke izicithi, masiwasuse amaxolo abolileyo ukuze kusinde nesibonda esinguMzantsi Afrika ekuboleni.